Izindaba - I-oda Lokulungisa Eliboshwe nge-Operating Light
Lapho amakhasimende angaphandle ethi angikaze ngithenge ilambu lakho lokusebenza, ingabe ikhwalithi yalo ithembekile? Noma ukude kakhulu nami. Yini okufanele ngiyenze uma kunenkinga yekhwalithi?
Konke ukuthengisa, ngalesi sikhathi, kuzokutshela ukuthi imikhiqizo yethu ihamba phambili. Kodwa uyabakholelwa ngempela?
Njengomkhiqizi okhanyayo wokukhanya okusebenzayo obekuhileleke kakhulu embonini yezokwelapha iminyaka engama-20, singakutshela ngedatha enkulu yokudumisa yomsebenzisi ekhaya nakwamanye amazwe, sicela usithembe.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sithole i-imeyili evela kumakhasimende. Ikhasimende lathenga ilambu lethu elisebenza nge-LED ngo-2013. Kusukela lapho, akubange kusaba khona sicelo sokulungiswa.
Kodwa-ke, ngenxa yokuthi impilo yokusebenza kwebhodi le-PCB isondele ekugcineni, banquma ukusibhalela izesekeli ezintsha ezizolungiswa.
Kusukela ngo-2013 kuya ku-2020, besilinde le oda yokulungisa iminyaka engu-7.
Siyajabula kakhulu ukuthola le imeyili. Esikhathini esedlule, besilokhu sinamathela kulayini wekhwalithi futhi silwela ukwenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Sihlala sibuyekeza ukwakheka komkhiqizo nokwakheka ngaphandle kokubandakanya izimpi zamanani. Kulezi zinsuku, imikhiqizo yethu isetshenziswe amakhasimende iminyaka eminingi. Manje amakhasimende asathenga izesekeli futhi aqhubeke nokuzisebenzisa. Kwanele ukubona ukuthi ukuphikelela kwethu kunenjongo kakhulu.
E-China, sinamakhasimende amaningi athemba ikhwalithi yethu kakhulu. Ngemuva kokuthi ukukhanya kwethu kokusebenza kuguga, lapho uthenga ukukhanya okusha kokusebenza, basanikela kuqala uphawu lwethu. Noma, lapho isibhedlela esidala sidlulela esizeni esisha, basasicela ukuthi sibasize bakhiphe ilambu elidala lokusebenza basifake kabusha esibhedlela esisha.
Siyabonga ukwesekwa okuqinile kwalaba basebenzisi, futhi nakanjani sizosekela umoya wokuthobeka, silalele ngokucophelela izidingo zamakhasimende, siqhubeke nokwenza ngcono imikhiqizo, futhi sihambisane nesikhathi.